Umsuka nezinganekwane zamaGrikhi ze-Ixion ne-halo yelanga engu-22º | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ezikhathini zasendulo, kwakukhona abantu abaningi ababezama ukuchaza ezinye zezimanga zemvelo ezimangazayo kanye nezinye izimo zezulu. Ngenxa yalokhu, wanikeza incazelo yokuthi imbangela yemvelaphi yalesi simo sezulu kanye nemvelo kwakuyizenzo zabanye onkulunkulu basezinganekwaneni. Labo nkulunkulu basebenza ezweni labantu ngenhloso ethile. Isazi sase-Italy siphethe ukuchaza i-22º halo ezinganekwaneni zamaGrikhi. Isazi sase-Italy esasithola sathiwa yiPaolo Coloma futhi saziwa njenge Ixion.
Kulesi sihloko sizokutshela zonke izici nemvelaphi yenganekwane ye-Ixion.
1 Wayengubani u-Ixion?
2 Inganekwane ye-Ixion ne-halo
3 Kwakhiwa kanjani i-halo yelanga
U-Ixion wayeyinkosi yasenganekwaneni yaseThesaly eyayinedumela njengenkosi embi. Wayengeyona inkosi embi kuphela, kodwa futhi wayengumuntu omubi. Washada noDia owayeyindodakazi ka-Eioneus, kodwa ukukhokhwa kwezipho ezazithenjisiwe enhlabathini yakhe entsha kwakunganakwa. Ngaleso sikhathi, kwakukhona isiko futhi kwakungukunikela izipho kubasekhweni ngesikhathi somshado. Iqiniso lokuthi u-Ixion akabanikeli abasekhweni lakhe ngesikhathi somshado kwasusa impi. Umphumela wempi ugcine ngokuthi U-Ixion uphonsa u-Eioneus emgodini wamalahle ovutha ngokhuni.
Njengoba kunikezwe iqiniso elinje, akekho noyedwa wezikhulu zaseGrisi obengazimisela ukuxolela ubugebengu obenziwe yi-Ixion. Ekugcineni, uGod Zeus uqobo wadatshukelwa futhi wammemela eNtabeni i-Olympus ukuze ahlanzwe. Ubugebengu babunganele ububi obabukhona u-Ixion. Lapho ese-Olympus, indawo yonkulunkulu bamaGrikhi, wavuza ukuphana kukaZeus emzameni wakhe wokuzihlanganisa nonkosikazi wakhe uHera. Njengoba uZeus wayehlakaniphe impela, wakwazi ukuqagela izinhloso ezimbi futhi wasungula isu. Ngamandla akhe, wakwazi ukuguqula ifu elibizwa ngeNefele futhi walinika ukufana okufana ncamashi noHera.. Ukuxhuma komanyano okwavela kwaveza uCentaurus owayenguYise weCentaurus.
Isijeziso uZeus asithola ku-Ixion sasisibi futhi singunaphakade. Futhi ukwazile ukuthola zonke izinhloso ezimbi ngoHera. UZeus wayala uHermes ukuthi aphathe ukubopha izandla nezinyawo zika-Ixion ukuze ambeke esondweni elinamaphiko avuthayo ukuze akwazi ukuzigingqa kuze kube phakade.
Inganekwane ye-Ixion ne-halo
Njengoba sishilo ngaphambili, yonke imvelaphi yenganekwane ye-Ixion ivela kuhlobo lwesimo semvelo ebesingachazeki. Okunye ukuvela kwezimo zemvelo ezifana ne- i-halo yama-degree angama-22 ajwayelekile eGrisi. Kulokhu, le halo yenzeka ngezikhathi zezimvula ezinkulu futhi kuyadida ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umsuka wasenganekwaneni uqhubeke. EGrisi lasendulo kwakukhona inganekwane eyayichaza umsuka wale nto.
Njengoba kunikezwe le ndaba esiyitshele ngenganekwane yamaGrikhi lapho u-Ixion abonakala ejeziswa khona nguZeus uqobo kungumsuka we-halo engu-22 degree. Futhi kuyachazwa ukuthi uPaolo Coloma, uchwepheshe wase-Italiya wezinganekwane zamaGrikhi, uyaqinisekisa ukuthi umsuka wencazelo yale nto ukuthi yi-Ixion evula isondo elivuthayo njengesijeziso sikaZeus.
Ukuze achaze ngokuxhumeka okukhulu kakhulu ngezinganekwane zamaGrikhi, uPaolo uthi i-halo engama-22 degree ilandela ilanga futhi kwesinye isikhathi iyabonakala amahora ambalwa. Ngomngcele obomvu kungathathwa njengokuyindandatho yomlilo.
Ngakolunye uhlangothi, kulolu hlangothi lwezinganekwane i-halo engama-degree angama-22 nayo ihlotshaniswa neNefele, ifu elaguqulwa. Isimo sobumbano phakathi kuka-Ixion noNefele sasisezulwini ngoba siyindawo kaZeus no-Olympus. Ngokwesiko ngaphambi kwale ndaba, kuthiwa ngosuku olwandulela isijeziso bekuneqhwa. Isondo elivuthayo lichazwa njengendiza esibhakabhakeni ingunaphakade.
Yonke le nsumansumane futhi ihlobene nemvula kwazise ukuvela kwale halo kuvame ukuba yisandulela sezindawo ezifudumele ezingena kwezulu.
Kwakhiwa kanjani i-halo yelanga
Manje sizochaza ukuthi i-halo yelanga ivela kanjani ngokwesayensi hhayi ngezinganekwane. Lo mkhuba uchazwa njengendilinga ekhanyayo ezungeze ilanga, eyenzeka ezindaweni ezibandayo. Phakathi kwazo, kwenzeka kaningi eRussia, e-Antarctica, noma enyakatho yeScandinavia. Imvamisa kwenzeka lapho izimo zemvelo zilungele ukwakheka kwazo. Ngakho-ke, zingavela nakwezinye izindawo. Yakhiwa izinhlayiya zeqhwa ezisendaweni yokumisa engxenyeni ephezulu kakhulu ye-troposphere. Lapho ukukhanya kwelanga kwehlela kulezi zinhlayiya zeqhwa, zikhipha ukukhanya futhi zenza yonke imibala yemibala ibonakale.
Umphumela obonwe ku-halo uyefana nowothingo lwenkosazana. Kungabizwa ngokuthi uthingo oluyisiyingi olubonakala kakhulu ngokuba yi-iridescent. Ukuze isimo se-halo senzeke kwenye ingxenye yomhlaba, izindawo ezinamazinga okushisa aphansi ngokwejwayelekile ziyadingeka. Kufanele ibekhona nayo umehluko omkhulu namazinga okushisa avela phezulu namazinga okushisa aphezulu. Ngale ndlela, kungahle kube namakristalu eqhwa anele ebangeni eliphakeme anomthwalo wokukhanyisa ukukhanya ukuze kwakheke i-halo ephelele. Kwezinye izindawo lapho amazinga okushisa ephakeme, lesi simo asikwazi ukubonwa noma sifushane kakhulu.
Ukuqhathanisa okuphezulu okukhona emazingeni okushisa ekuseni yilokho okwenza ukubonakala kwala ma-halos. Ekuseni umoya ubanda njengoba ungazange ube nomthombo wokushisa ovela elangeni ubusuku bonke. Kungezinye zezizathu zokuthi kungani ngi-halo njalo ekuseni. Enye imfuneko ukuthi uhlobo lwamafu olusesibhakabhakeni ngaleso sikhathi amafu e-cirrus. Futhi ukuthi lawa mafu akhiwa amakristalu amancane eqhwa okuyikho okutholakala ezinqubweni zokukhombisa nokuphinda ukukhanya kukhanye.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi nge-halo yelanga nangenganekwane ye-Ixion.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Ixion